Now for Reddit 5.8.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.8.6 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား Now for Reddit
Now for Reddit ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အခုတော့ Reddit ဘို့ browsing အတွက် Reddit များအတွက်လှပသော, လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုပလီကေးရှင်း။ ဖြစ်ပါသည်
Reddit သငျသညျအသီးအသီးနေ့က web ပေါ်မှာ posted ကိုအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပို့စ်များ, ဆင်းတုနှင့်ဗီဒီယိုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏သငျသညျတဖနျပျင်းခံရဘယ်တော့မှကြည့်ရှုရန်နှင့်အတူ!
Browse ကိုရယ်စရာကြောင်ဓာတ်ပုံများ ဆွေးနွေးရန်လက်ရှိ ကိုသတင်းပုံပြင်များ ကိုဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ် ကိုဗိုင်းရပ်စ်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှု ကိုလူတိုင်းက Facebook သို့မဟုတ် Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေသည်။ စိတျထဲမှာတိကျတဲ့အတိုးရှိပါသလား? Reddit တွင်သင်သည်ရှိသမျှဝါသနာနှင့်အကျိုးစီးပွားများအတွက်သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အခြားတူသောစိတ်အသုံးပြုသူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင် - ကြောင်းတီဗီစီးရီးသင်တို့အပေါ်မှာချိတ်ဆက်နေတာပါ, သင့်အကြိုက်ဆုံးအားကစားအသင်း, ပင်သင့်ရဲ့ဇာတိမြို့!
•တင့်တယ် interface ကို
•လွယ်ကူစွာ (subreddit ပြောင်းလဲဖို့ပွတ်ဆွဲ) ကိုအသုံးပွုဖို့
• Browse ကို Imgur ဓာတ်ပုံများ, GIF များနှင့်ရယ်စရာလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု
•စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Reddit တီဗီပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများဦးတည်ချက်များ
•မဲ, comment ကိုဖျောက်ကယ်တင်နှင့်ရှယ်ယာ reddit အကြောင်းအရာ
•အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့ရုပ်တုဆင်းတုနှင့် GIF များ Save
• reddit ကိုရွှေ features တွေကိုထောက်ပံ့
•အပြည့်အဝ reddit mail ကိုထောက်ခံမှု
• Sync မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ Desktop အကြားရေးသားချက်များကိုဖတ်ရှု
• Reddit 500,000+ subreddits တ Subscribe
တုံ့ပြန်ချက်နဲ့ app ဆွေးနွေးမှုများအတွက် r / redditnow အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို Join ။
အခုတော့ Reddit တစ်ဦးတရားမဝင် App ဖြစ်ပါတယ်ဘို့, ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ Reddit နှင့် reddit တပါးလိုဂို, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးစားဆင်ယင် reddit Inc ကပိုင်ဆိုင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ထားကြသည်နှင့်လိုင်စင်အောက်တွင်အသုံးပြုကြသည်။
Now for Reddit အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Now for Reddit အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Now for Reddit အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Now for Reddit အား အခ်က္ျပပါ
yamiyukisenpai စတိုး 2.28k 737.22k
Now for Reddit ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Now for Reddit အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.8.6
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.iubenda.com/privacy-policy/69387339
Release date: 2019-07-12 20:36:30
လက်မှတ် SHA1: 83:06:61:87:86:96:39:76:EB:2B:BF:07:7E:6B:CF:82:A1:1A:CF:E7
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Miles Cooke
Now for Reddit APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ